Debut muna bauma China 2016 Chapupu How SHANTUI kuti "Invisible Champion" anotamba "Funga zvimwe zvokugadzira" Chess - China Shanghai Risen
Debut muna bauma China 2016 Chapupu How SHANTUI kuti "Invisible Champion" anotamba "Funga zvimwe zvokugadzira" Chess
The rakabudiswa date: Feb-03-2017 Verenga nhamba: 241
Sezvo pamusoro youinjiniya muchini chiitiko, "bauma China" (International Trade Fair nokuda Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines uye Construction Vehicles) kwete chete inoratidza nyika Chinese kumusika zvigadzirwa akaongorora uye vakatanga yakavakirwa Chinese yeGmail.END_STRONG ruzivo asiwo anoudza nyika kuti tiri kuita basa kusunda ramangwana kukura noruzivo, uchenjeri uye Kufungidzira. In nhandare iyi apo pose kuvakwa michini hofori vorongerwa nemumwe, SHANTUI, sezvo mutungamiri mutsva maindasitiri kukura mirayiridzo uye nezvemaitiro zvose zvapfuura nhumbi, rinopawo ayo kwepachena pamutemo - "Kufungidzira, akangwara kugadzira kwamuri". To nani vanodudzira nyaya, kunze kuronga kunoshamisa chikuru puranga sumbu chokuratidza, SHANTUI zvakare debuts mhuri chinoumba zvikamu uye zvinoriumba - "chisingaoneki shasha" pakati michina michina.
Akangwara, simba-okuponesa uye kuita ndidzo injini chinoumba zvikamu uye zvinoumba SHANTUI vakazotanga kutyora yakakwirira magumo muenzaniso pasi idzva chakaipa. "Construction michini indasitiri of China anogadziriswa 90% penhau. Chinokosha kukunda okupedzisira 10%. Saizvozvo achikwidza okupedzisira zana mashoma metres kuGomo Everest. Inoda zvakawanda simba, mari yakawanda, vakawanda uchenjeri uye zvakawanda tarenda. "Kufanana" Climbing Mount Everest pfungwa "wakatangwa na President & Munyori Party Committee Wang Min, SHANTUI atanga voisa" Funga zvimwe zvokugadzira "wechesi kuti makirisito mativi uye yenhengo adarika. Pakati pavo, SHANTUI Hydraulics Co., Ltd., chikamu & chinoumba zvebhizimisi hwagadzwa muna 1975, kunoenderana hapana zvimwe zvinhu kupfuura makore makumi mana vakazvipira basa kutamba Chess uye kuti hydraulic zvinhu SHANTUI kupa zvose pamusoro China, kunyange aivigirwa mu batch kuti anenge kupfuura nyika 20 uye munzvimbo dzakadai Europe, America, Russia uye Japan kwakavakirwa kutsvakurudza uye kuvandudzwa mukuru-mugumo zvigadzirwa yakaziviswa ungwaru, simba okuponesa uye mabasa, kuvhenekera pakati chikuru muzviruva pose-siyana pakuvaka michini, zvakatipoteredza utsanana michini, migodhi michini, chikepe midziyo uye zvakadai uye pakupedzisira akava "shasha chisingaoneki" vaitungamirira kukura akazvimirira makirisito chikamu uye chikamu indasitiri.
"Valve" zvigadzirwa kupaza mukuru-kuguma chigadzirwa muenzaniso ne "ruzivo"
Sezvo pfungwa "kugadzira akangwara" Anomutsa, otomatiki uye digitaalinen zvakangwara ruzivo vari massively kureva mukugadzira maindasitiri, izvo kwete chete mberi anovimbisa unhu stableness mishonga uye kunonatsiridza kushanda kunyatsoshanda asiwo anozarura mugwagwa itsva chigadzirwa zvakafanana kubviswa uye muchiso ukoshi kuwedzera. By zvikuru kubata mukana, chinoumba mativi uye zvinoumba SHANTUI pfungwa dzavo tsvakurudza uye kukura kumusoro-kuguma hydraulic maatomu akafanana mukugadzira munda. Sezvo SHANTUI vawana emakambani European maviri - AMCA kubva Netherlands uye FT kubva kuGermany, pamwe pokugadzwa European Research Centre SHANTUI, a "ekufambisa munyika yose + vakazvimiririra itsva" R & D ecosphere dzemhuri izere hydraulic zvinhu zviri kutora chimiro.
Pashure pokunge dedusted masekondi 15 mumhepo kugeza, iwe kupinda pedyo-mhando dzose-tembiricha workshop. Kunyange zvazvo rinopfungaira Michini inonyatsoratidza munzeve, tarisa, uye kwete vazhinji kushanda vashandi vanogona kuonekwa, nokuti inopiwa ne zvikuru zvaitika kugadzirwa pamwero. Mukuru kugadzira midziyo unotsiva ruzhinji yevashandi. Vashandi Several panzvimbo kana Porishi zvinhu pasi matochi kana kuchengeta nokungwarira kukuedzai midziyo "rokuongorora" zvinhu zvakafanana vanachiremba ... zvose kamwe, izvozvo sokuti havasi mukugadzira maindasitiri zvinhu asi kuveza mifananidzo. Izvi hydraulic maatomu akafanana kugadzirwa mutsetse kubva SHANTUI Hydraulics Co., Ltd. Various mavharuvhu hydraulic showcased ari zvakanaka vakaberekerwa ichi dzaFord.
Kuti vabudirire zvose-kumativi budiriro iri hydraulic munda, muna 2012, SHANTUI akatora zviito uye vawana maviri European mukurumbira hydraulic vagadziri - FT kubva kuGermany uye AMACA kubva Netherlands; panguva imwe chete, SHANTUI zvakare paakapiwa mamiriyoni 360 Euro kudzika European R & D muzinda muGermany uye kuisa pfungwa chinoumba zvinhu uye pfungwa ruzivo zvakadai hydraulic vharafu, pombi, injini uye akachenjera kuzvidzora. Pasi simba marongerwo ichi, SHANTUI Hydraulics vakaumba kuvharwa munyika yose-kwakarongeka wezvikamu kwakabatana uye wezvikamu vaitsigira pamwe ukama, pamwe FT kubva kuGermany, AMACA kubva Netherlands, European Research Institute uye zvakafanana kuti kushanda nesimba kurwa simba pakukunda mukuru-mugumo moyo hydraulic mativi uye zvinoriumba. In zvakanaka ichi, yemagetsi muhombe piro vharafu ndiyo mugumisiro kubudirira mune ichi tsvakurudzo uye kukura ecosphere.
Zvaaiva ruzivo injiniya mu European R & D Center, Doctor Fei Kaoyin, kugadzirisa swinging kuitwa Cranes, vakabatana mu "kumahofisi Optimization" Project izvo zvikuru kunangidzirwa kuvandudza operability, simba-rinoponesa kuita uye stableness. Sei dzifambirane pamutsago chiito? Doctor Fei Kaoyin kamwe yakarongwa chiono musangano kuti kakawanda. To sevanhu vakuru kutsiva huripo hydraulic kupfimbwa chete yemagetsi kudzora kupfimbwa, iye nharo dzinotyisa pamwe navo. Pakupedzisira, pane yakabuda yose yokutanga vanoshingaira buffer basa izvo kushandiswa yemagetsi Proportional rokuyamura vharafu kuziva swinging kuitwa Cranes. Nganonyorwa yemagetsi muhombe piro vharafu akatsiga zvikuru uye kumeso panguva swinging matanho, mamwe stably kunonatsiridza budiriro chitsva zvinhu uye ruzivo pamusoro SHANTUI.
Kwakadaro kwakarongeka tsvakurudza uye kukura Chiitiko zvose pamusoro mhuri siyana hydraulic vharafu yemudzimu SHANTUI. Muna 8 Mazuva, mavharuvhu vashanu kupatsanurwa, nemhando mbiri vakaungana uye iine ari kushandisa ... Izvi kuitika tsvakurudzo uye kukura mano kumahofisi chikwata kuti hydraulic mavharuvhu ose SHANTUI. The chirongwa rinotungamirirwa nomudzimu European Research Centre SHANTUI uye chinotsigirwa SHANTUI Heavy Machinery, SHANTUI Hydraulics uye SHANTUI Institute. Four-arty chikwata pakutsvakurudza uye kukura chaitwa kuti nguva yokutanga kuitira kuti hydraulic mavharuvhu pamusoro SHANTUI vari yekudyidzana hwakavandudzika mu chigadzirwa parameters, akadai cost, uremu uye nguva mhinduro, uye kuita zviratidzo, zvakadai kuzvidzora, njere uye chiito stableness. In dumba kuti makirisito mativi uye zvinoumba SHANTUI, zvigadzirwa siyana kunokonzeresa ndinokuudzai kuti hydraulic mavharuvhu pamusoro SHANTUI izvo kupfuura avo "ungwaru" zvazova "kwehwamanda itsva" izvo "zvizere hydraulic hurongwa mhinduro Provider" anokwanisa kuenda yose, akadai APVM akatakudza nehanya vakawanda chikwata vharafu uye Chinyorwa chinja vharafu izvo dzinokudziridzwa zvikuru pose mukurumbira chitoro vagadziri uye vanokwanisa kudzivisa 250,000 kunokanganisa nemiedzo uye 20,000 commutation nemiedzo, XSV akatakudza nehanya vakawanda chikwata vharafu izvo dambudziko isina Thando zvazvinoita kwazvo 1.000.000 nguva uye European uye noungwaru-kugadzirwa-mu-China APV vakawanda chikwata vharafu.
Vaka "mutema vanopfuura" ne "simba kuchengetedza"
Equipment kugadzira ndiyo hwaro National zvoupfumi uyewo ivimbiso inokosha maindasitiri update uye kwesayenzi kuvandudzika kuti maindasitiri akasiyana-siyana. Mumakore achangopfuura, edu michina kugadzira indasitiri wamuka ndezvokuti maindasitiri hurongwa rave kuramba kuvandudzika uye tikwanise uye Michina utsanzi yave kunowedzera ruripo. Zvisinei, inotevera simba zvinodyiwa uye kusvibiswa zvakawanda uye kunoshamisa zvikuru. Zvikurukuru, adaption kune zvinodiwa zvakatipoteredza uye zvipenyu nezvakazvipoteredza kukura zvinofanira kufungwa zvirerukire magadzirirwo kugadzira musoro emadziro okuvaka michini, uye zvazvinoita trendy kutsvakurudza uye kukudziridza zvakatikomberedza-ushamwari zvigadzirwa. Saka anosungwa kushandisa chikamu uye chikamu ruzivo vari rikurumidze uye simba-rokuponesa. Somunhu vomuzana kirasi mumhuri chikamu uye chikamu zvebhizimisi, SHANTUI Hydraulics iri vakazvipira rikurumidze pakutsvakurudza chigadzirwa uye kukura matanho, kushandisa chiedza uremu michina kuti reserved pamusoro hydraulic zvinhu uye kuedza kupa vatengi rikurumidze uye simba-rinoponesa hydraulic hurongwa mhinduro rwokugadzira rutsigiro .
"Sezvo chiedza-uremu makwikwi chigadzirwa takatora makore akawanda kusika, zvichaitika kuti zvakare vavandudze tikwanise kuita kuvandudza moto injini. Mune ramangwana, tichabata vomurova chizvarwa chechitatu nechechina zvayo chiedza uremu zvigadzirwa kuti munowedzera akanaka simba rakawanda unongotaura. "Izvi chiedza uremu makwikwi chigadzirwa vakarehwa Mugadziri Chief Zhang Qingkou kuti zvibereko SHANTUI Hydraulics ndiye aruminiyamu telescopic mutopota debuting uyu bauma zvakanaka. Hazvina mhosva wokutanga muna China. Kana chigadzirwa kwakadaro akapiwa kekutanga, vatengi zvose mate mukanwa chiedza uremu michina pasina chaakasiya izvo zvinoita anokwanisa kuitwa noruoko mumwe. High simba aruminiyamu chiwanikwa iri vakagamuchirwa nokuda chikuru chikamu chigadzirwa kwakadaro uko kurema ndiwo 2/3 vaduku pane dzose Stainless pombi simbi. Kunze, inokosha pamusoro kubudiswa zvemichina uye kutsigirwa vaifarira zvemichina vari kuiswa. Saka, chigadzirwa ichi anopiwa pamwe yepamusoro kusakara pfuma uye pamusoro zvakaoma, ayo vachida vachizvitakudza kugona iri nani, uye upenyu basa kunosimudzirwa. Uyezve, haana chete kunoderedza simba kudyiwa chikuru puranga asi kuri kupenya uye zvakawanda kusanduka, saka zvachose kubvisira Nezvagara Zviripo apo mumhuri moto injini vanofanira kuvimba kupinza aruminiyamu chiwanikwa nenyere.
Kushandiswa chikamu uye chinoumba chiedza kurema zvemichina vachishoropodza kuti simba kuchengetedza mabasa chikuru puranga. Sokuziva tinoziva, zvose hydraulic humburumbira zvigadzirwa, zvakadai Cranes siyana, loaders uye pombi marori, muri itsva zvinogadzirwa simba-kuchengetedza yakarongerwa uye kugadzirwa kwakavakirwa nhaka yapfuura yokutsvakurudza uye kugadzira ruzivo uye kuvakwa maitiro chikuru puranga. By kuramba muedzo Chimiro Optimization uye kuongorora chiedza uremu chikumbiro, kambani anoshandisa mukuru-simba yokufungidzira zvinhu kutsiva chinyakare humburumbira zvinhu kuitira kuti zvigadzirwa rupiwe nezvakanaka zvemaziso uye michina unongotaura. Saka, ichienzaniswa dzose zvigadzirwa, uremu ane humburumbira kwakakwana ndiyo 20% kushoma kana kumusoro. The kambani iri kutungamirira ramangwana kukura kutungamirirwa chiedza uremu zvigadzirwa.
Panguva ino, remanufacturing michina hwakaratidza muchidimbu uye chikamu dumba uyewo kutsoropodza pakuvaka "girini vanopfuura" akadai mukuru velocity oxy-mafuta uye plasma electrolyte pakuonekwa. Right ikozvino, remanufacturing indasitiri iri zvishoma nezvishoma Virtual kupinda mugero itsva iyo kuvaka muchini indasitiri ari kushingaira kuongorora uye kuedza uyewo mumwe michina kiyi iyo Chikamu chinoumba zvikamu uye zvinoumba SHANTUI adopts kutanga tsika zvigadzirwa asara zvikuru pamwero. Kuti kuziva zvakazara kukosha kuberekwazve zvigadzirwa, kambani akamisa zvikuru munhu remanufacturing bazi pfungwa kutsvakurudzawo hydraulic humburumbira remanufacturing uye kiyi kuvariritira kugadzira michina uye dzinoumba remanufacturing bhizimisi pepuranga uye kutsvakurudza Michina hurongwa. With mijenya pamusoro remanufacturing utsanzi Kubudirira uye kusimudzirwa chikumbiro zvabuda, ndirairei kuhwina makuru-tonnage remanufacturing zvaMambo pamwero mukuru simbi makambani nebudiriro maodha kwerunyararo American kupinza sepombi, ichiidzwa pachena kuti post-musika razova mumwe bhizimisi budiriro achifumira pfungwa wekambani.
Ona waivako kubva "Chip", maawa 8000 "haufi" upenyu basa
Sezvo kuvaka michini anogara vakavhiyiwa panze uye kukundwa kwazvo ezvinhu akadai sejecha dutu uye mwando, zvakawanda zvinoenderana rakavimbika zvigadzirwa. Nemamwe mashoko, hapana basa muitiro maindasitiri ruzivo vari kukura kuva, stableness uye rakavimbika zvigadzirwa zvinofanira kugara pfungwa dzedu wokutanga tinofanira kuomerera. Izvi zvakare nyaya yokutanga anorenda nezvakaonekwa kuvaka michini vanogadzira zvavo kutsigira mugove bhizimisi. Sezvo yendarama mureza "michina yemhando yepamusoro, haufi" wakabudiswa, SHANTUI uyewo kukurisa zvinangwa retargeting uye refocusing pamusoro kiyi chinoumba michina uye chinoumba mativi uye zvinoriumba. Sezvo zvichiita hydraulic humburumbira mugadziri, SHANTUI Hydraulics akabvuma pepa dzinogutsa mureza iyi maawa 8000 "chaizvoizvo" unongotaura.
"Bang-" Kana Vacheri anotinhira, mumwe kuvakwa muna Pilbara nzvimbo Australia vakanga vava kungotaura nezvekudzoka zvakare. Munzvimbo ino migodhi, pedyo neequator uye inopisa uye chakaoma, uye iro tembiricha panze ndiyo nguva dzose kupfuura 37 °, munhu super-guru-tonnage Excavator rave consecutively kuitwa 8000 mhosva isina kushanda kwemaawa 8000. mugumisiro kwakadaro kunokonzerwa chiedza hydraulic zvibereko SHANTUI vakapfeka mukati. "Mhaka isina basa nguva hydraulic sepombi China kunyange hazvigoni akaziva nevamwe dzakawanda vomuzana kirasi zvigadzirwa. Parts uye zvinoumba SHANTUI vari 'anokosha' isu akacherawo mu China! "Mashoko iyi midziyo Kumutungamiriri nzvimbo iyi Australian mugodhi anoratidza vanovimba hydraulic humburumbira zvibereko SHANTUI. "Gem" akataura pamusoro ndiye hydraulic humburumbira kubva Excavator rairatidzwa dumba chinoumba zvikamu uye zvinoumba SHANTUI. Kwenguva refu, nokuti mukuru yokutsvakurudza uye kubudirira zvakaoma uye yakaoma kubudiswa unyanzvi, pamwe yaivhuvhuta kushanda zvemupiro chikuru puranga, Excavator aine zvinodiwa kuti cushioning uye airtightness. Saka, zvinhu zvakadai tiri "korona" pakati hydraulic sepombi uye mumwe update riri pasi chaanoonekwa. Boom humburumbira kubva super-guru-tonnage Vacheri hwakaratidza nguva iri mudzimba pakukura-tonnage Excavator humburumbira akaongorora uye kugadzirwa nevanhu SHANTUI Hydraulics ari kufunga huripo ano hwaro uye midziyo okufunga. Somunhu pose chikuru yemakwikwi chigadzirwa dzaKora zvikamu uye zvinoumba SHANTUI, kushanda munhevedzano nezvinhu zvitsva, michina mitsva uye nzira itsva kwete chete anokoromora humburumbira Michina Bottleneck mudzimba super-pamwero mukuru Excavator asiwo kunoita akasiyana kuzadzikisa musoro puranga vanoshandisa pamba kana kumwe. It kamwe zvakare anopa yakanakisisa kududzirwa chigadzirwa yokuti "michina yemhando yepamusoro, chaizvoizvo".
Uyezve, pane "zvigadzirwa simbi" wokumwe-achitarisa ari dumba idzo kupa rutsigiro rakasimba "Funga zvimwe zvokugadzira" wechesi kuti "chisingaoneki shasha": iri rinoumbwa matatu sepombi yakafanana-makatarira, uye, zita remadunhurirwa se "triplet" , chinokosha-humburumbira matatu sequential telescopic mudziyo; kwakavakirwa hoisting zvinoitwa vakawanda-pechikuva telescopic jibs kuti rori-hwavapo kondo, chigadzirwa, kuburikidza-humburumbira matatu pindana placement, kwete chete yekudyidzana anovandudza hoisting mano chikuru puranga asiwo kunoita Chimiro Optimization rwokugadzira update kuti chikuru waverenga lorry- akatasva kireni; Svikiro kuzviremekedza nokukiya, magumo-kuzvidzora nokukiya uye rose-muitiro-kuzvipira nokukiya humburumbira pakupedzisira akapedza kuburikidza 28 kupfimbwa kuvandudzwa uye miedzo zvinobudirira kugutsa chassis gozvo zvinodiwa kuvakwa michini, ziva kwezvinhu budiriro munzvimbo zhinji zvinhu zvakadai yokuedzwa zvakarurama, achipindura nokukurumidza uye upenyu basa nokukiya zvikamu uye zadza pakakoromoka pakati vakadaro mudzimba okunze uye kupinza zvigadzirwa muupenyu basa uye rakavimbika kwakaita kuti kare akawanda apfuura; siyana hwokugadzira mienzaniso inoratidza pamusoro kubudiswa michina, nomoto zvemichina uye mbishi zvinhu michina kutsigira zvakasimba stableness uye rakavimbika chinoumba zvikamu uye zvinoumba SHANTUI, iyo inoita chikuru unyanzvi pakutsvakurudza kusvika padanho "chaizvoizvo".
"Uyezve pasura hydraulic munda noruzivo utsanzi, kuhwina makwikwi dzakawanda pamwe nani basa." Kunyange zvazvo kuchinja basa akaunzwa itsva zvakajairika Chinese upfumi achiri mberi, chinoumba mativi uye zvinoumba SHANTUI vakapakata "rutsigiro simba" akaita akaparirwa ari Kufungidzira kudzokera kare . Somutungamiri nokuti mukuru-kuguma chinoumba mativi uye zvinoumba China, "shasha chisingaoneki" pamusoro SHANTUI anosungwa kuti "kusvika pamusoro peGomo Everest", kuhwina ichi mukuru-mugumo budiriro "Kufungidzira wechesi" uye dzichangobva kutangira bauma China 2016 kusvika mberi akananga nyika kubva pano uye bongozozo simba simba kuti "Made in China"!
24 awa HOTLINE: 0086-13916689101
Donhwe US ​​A ZVINOKOSHA!